ဤရွေ့ကားလအတွက်ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်၏အစီအစဉ်များဖြစ်သည် Gadget သတင်း
များစွာသောလသည်ကာလတိုအတွင်းအင်္ဂါဂြိုဟ်သို့ရောက်လိုသောအေဂျင်စီများဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်လေ့ရှိသကဲ့သို့၎င်းတို့သည်ရရှိခြင်းအကြောင်းပြောဆိုကြသည် လပေါ်မှာအမြဲတမ်းအခြေစိုက်စခန်း install လုပ်ပါလူသားများသည်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအိပ်မက်မက်ခဲ့သည့်အင်္ဂါဂြိုဟ်သို့ခရီးစဉ်ကိုသယ်ဆောင်ရန်အတွက်ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဖြန့်ချိရန်အတွက်စင်မြင့်တစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိသည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့အင်္ဂါဂြိုဟ်သို့ကျွန်ုပ်တို့ခရီးစဉ်ထွက်နိုင်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လသို့ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်သိသာထင်ရှားဆုံးသောအတွေးအခေါ်များပေါ်ပေါက်လာသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ဤအချိန်ကထက်လျော့နည်းဘာမျှဖြစ်ခဲ့သည် ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်လက်ရှိတွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အလွန်အရေးကြီးသောမဏ္pillိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာဂြိုဟ်ရှိသက်ရှိသတ္တဝါအားလုံး၏နေထိုင်မှုနှင့်ရှင်သန်မှုကိုတိုးတက်စေမည့်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုအဆိုပြုထားသောကမ္ဘာပေါ်တွင်အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
2 ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်၏အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်အရင်းအမြစ်များစွာလိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်သူ၌မရှိသောဘဏ္onesာရေး။
သူတို့အမည်အားဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်မပြုသောသူတို့အဘို့ ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်ပြောတာကဒီဟာကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး စီအီးအိုနှင့်အမေဇုံကိုတည်ထောင်သူသူသည်လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေနှင့်မလုံလောက်သေးသောကြောင့်သူသည်သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြွယ်ဝမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အလယ်အလတ်ကာလ၌ကြယ်၏ကိုလိုနီပြုခြင်းကိုရရှိရန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများကိုအဆိုပြုလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထူးသသူစိတ်ဝင်စားခဲ့သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိစက်ရုံများအားလုံးကိုလသို့ပြောင်းရွှေ့ပါရေခဲရေများနှင့်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များစွာရှိသည့်နေရာတွင်ပင်။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲဘီဇို့စ်ရဲ့စိတ်ကူးကနည်းနည်းလေးအံ့သြစရာကောင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုနောက်ထပ်ညစ်ညမ်းစေခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများမှညစ်ညမ်းပစ္စည်းထုတ်လွှတ်မှုကြောင့်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ အထူးသဖြင့်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာခြင်းနှင့်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ခြင်းတံခါးဖွင့်ရန်ကြိုးစားသူများအတွက်အလွန်လေးလံသောအငြင်းအခုံဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အခြားအစပျိုးမှုများနည်းတူစက်ရုံများကိုလသို့ပေးပို့ခြင်းသည် Jeff Bezos မှရရှိခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောရည်မှန်းချက်မဟုတ်ချေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သလို ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည့်အတိုင်းဤစီမံကိန်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရန်စိတ်ဝင်စားမည့်သူဌေးများစွာရှိသည်။ စတင်ခွင့်ပြုချက်အချို့ရရှိရန် သတ္တုဓာတ်ထုတ်ယူနှင့်သူတို့ကိုကမ္ဘာမြေသို့ပေးပို့ပါ.
အကယ်၍ ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်ကိုသူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်လျှောက်တွင်တစ်ခုခုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိခဲ့ပါက၎င်းသည်သူပါဝင်သောစီမံကိန်းများအားလုံးသည်တဖြည်းဖြည်းပုံသဏ္takeာန်ကျဆင်းစေရန်သူ၏အလုပ်ကိုအချိန်ယူပြီးလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ၊ လကိုလိုနီပြုခြင်းဟူသောစိတ်ကူးသည်နောက် ၁၀ နှစ် ၂၀ အတွင်းဖြစ်ပျက်မည့်အရာမဟုတ်ပါ Amazon ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကိုယ်တိုင်အနေဖြင့်ယင်းသို့ဖြစ်ရန်နှစ် ၁၀၀ ခန့်အချိန်သတ်မှတ်ထားသည်.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါဝန်ခံရမယ်, လ၏ကိုလိုနီခေတ်အဘို့အနှစ် 100 ခန့်မှန်းချက်ငါ့ကိုထင်, အနည်းဆုံးအတော်လေးအကောင်းမြင်ပြောပေမယ့်အမှန်တရားကဒီရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်, တစ်စုံတစ် ဦး ကဤသဘောမျိုးစတင်အလုပ်လုပ်ရမယ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမယ်ဆိုရင်၊ ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်သည်စီမံကိန်းတွင်အလုပ်လုပ်နေပြီးဖြစ်သည်.
ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်ကိုသာကြည့်ပါကဤစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ငွေအမြောက်အမြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ကံကြမ္မာကထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်ထက် ပို၍ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည် ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်မိမိကိုယ်ကိုနှစ်မြှုပ်ခဲ့သည့်စီမံကိန်း၏ပမာဏကိုညွှန်ပြနေခြင်းဖြစ်သည် နာဆာနှင့်ပူးပေါင်းအများပြည်သူ - ပုဂ္ဂလိကစွန့်စားမှု.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နည်းပညာ » ဤရွေ့ကားလအတွက်ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်၏အစီအစဉ်များဖြစ်သည်